The Prince of Peace - Fiangonan'Andriamanitra any Suisse manerantany
lahatsoratra > Miresaka momba ny fiainana > Ny Prince of Peace
Tamin’ny nahaterahan’i Jesosy Kristy, dia nisy anjely maro be nanambara hoe: “Voninahitra any amin’ny avo indrindra ho an’Andriamanitra, ary fiadanana ho etỳ an-tany amin’ny olona ankasitrahany.” ( Lioka. 1,14). Mpandray ny fiadanan’Andriamanitra ny Kristianina, ka miavaka eto amin’ity tontolo feno herisetra sy fitiavan-tena ity. Ny Fanahin’Andriamanitra dia mitarika ny Kristianina ho amin’ny fiainana feno fihavanana, fiahiana, fanomezana ary fitiavana.
Mifanohitra amin’izany kosa, ny tontolo manodidina antsika dia feno korontana sy tsy fifandeferana foana, na ara-politika izany, na ara-poko, na ara-pivavahana na ara-tsosialy. Na dia amin'izao fotoana izao aza, ny faritra manontolo dia atahoran'ny lolompo sy ny fankahalana taloha. Nilazalaza an’io fahasamihafana lehibe io i Jesosy, izay hanamarika ny mpianany, rehefa nilaza tamin’izy ireo hoe: “Izaho maniraka anareo tahaka ny ondry eo afovoan’ny amboadia.” ( Matio 10,16).
Ny vahoakan’ity tontolo ity, izay mizarazara amin’ny lafiny maro, dia tsy afaka mahita ny lalana mankany amin’ny fiadanana. Ny lalan'izao tontolo izao dia ny lalan'ny fitiavan-tena. Fomban’ny fitsiriritana, fitsiriritana, fankahalana izany. Hoy anefa i Jesosy tamin’ny mpianany: “Fiadanana no avelako ho anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomen’izao tontolo izao no omeko anareo” (Jaona 14,27).
Antsoina ho be zotom-po eo anatrehan’Andriamanitra ny Kristianina, “hiezaka hahazo fiadanana” (Rom. 1 Kor.4,19) ary “miezaha mitady fihavanana amin’ny olona rehetra sy ny fahamasinana” (Hebreo 12,14). Miombona amin’ny “fifaliana sy fiadanana rehetra ... amin’ny herin’ny Fanahy Masina” izy ireo (Rom. 1.5,13).
Ny karazana fiadanana, “ny fiadanana izay lehibe noho ny saina rehetra” (Filipianina 4,7), mandresy ny fisaratsarahana, ny tsy fitovian-kevitra, ny fahatsapana mitoka-monina ary ny toe-tsain'ny fiangarana izay mahatonga ny olona ho voasaringotra. Izany fihavanana izany kosa dia mitarika ho amin’ny firindrana sy ny fahatsapana ny zava-kendrena sy ny ho anjara iray — “firaisan’ny fanahy amin’ny fatoram-pihavanana” (Efesiana). 4,3).
Midika izany fa voavela heloka isika noho ireo izay manota antsika. Midika izany fa maneho famindram-po amin'ireo mila izany isika. Midika izany fa ny hatsaram-po, ny fahatsaram-po, ny fahalalahan-tanana, ny fanetren-tena sy ny faharetana, izay tarihin'ny fitiavana rehetra, dia haneho ny fifandraisantsika amin'ny olona hafa. Midika izany fa ny fitsiriritana tafintohina, ny firaisana ara-nofo, ny fanararaotana, ny fialonana, ny mangidy, ny fifandirana, ary ny fanararaotana ataon'ny olona hafa dia tsy afaka mamaka ny fiainantsika.
Kristy hitoetra ao anatintsika. Hoy i Jakoba momba ny Kristianina: “Ny vokatry ny fahamarinana dia afafy amin’ny fihavanana ho an’izay mampihavana.” ( Jakoba . 3,18). Io karazana fihavanana io koa dia manome antoka sy filaminana eo anatrehan’ny loza, manome fiadanana sy fahatoniana ao anatin’ny loza. Tsy afa-bela amin’ny zava-manahirana eo amin’ny fiainana ny Kristianina.
Ny kristiana, tahaka ny olon-drehetra dia tsy maintsy miady amin'ny fotoam-pahoriana sy ratra. Saingy manana ny fanampian'Andriamanitra sy ny toky isika fa hanohana antsika Izy. Na dia maizina sy maizina aza ny toe-batana misy antsika, ny fiadanan'Andriamanitra izay ao anatintsika dia mampitony antsika, milamina, azo antoka ary mafy orina, amin'ny fahatokisana amin'ny fanantenana ny fiverenan'i Jesoa Kristy rehefa hitatra ny tany rehetra ny fiadanany.
Eo am-piandrasana an’io andro be voninahitra io, dia aoka isika handinika ny tenin’ny apostoly Paoly ao amin’ny Kolosianina 3,15 tadidio: “Ary ny fiadanan’i Kristy, izay niantsoana anareo koa ho tena iray, dia manapaka ao am-ponareo; ary mahaiza mankasitraka. ”Mila fiadanana ve ianao eo amin’ny fiainanao? Ny Andrian’ny Fiadanana – Jesoa Kristy – no “toerana” hahitantsika izany fiadanana izany!